Ixabiso eliphantsi lesitovu somoya eshushu seOrganic kunye neNPK yecompany yesichumisi sokomisa abaxhasi kunye nefektri | YiZheng
Irhasi yeoyile Isitovu somoya oshushu ihlala isebenza nomatshini wokomisa kumgca wokuvelisa isichumisi.
Yintoni isitovu somoya oshushu?
Inkqubo ye- Isitovu somoya oshushu isebenzisa ipetroli ukutshisa ngokuthe ngqo, yenza ukuqhuma okushushu ngonyango lokucoca okuphezulu, kwaye uqhagamshele ngokuthe ngqo izinto zokufudumeza kunye nokomisa okanye ukubhaka. Sele iyimveliso ebuyiselweyo yomthombo wobushushu wombane kunye nobushushu bendabuko kumthombo wobushushu kumashishini amaninzi.
Isetyenziselwa ntoni Isitovu somoya oshushu?
Ukusetyenziswa kwepetroli Isitovu somoya oshushu malunga nesiqingatha sokusebenzisa umphunga okanye ezinye izifudumezi ezingangqalanga. Ke ngoko, ukucoca umoya oshushu ngokuthe ngqo kungasetyenziswa ngaphandle kokuchaphazela umgangatho wemveliso eyomileyo.
Ipetroli inokuhlulwa ibe:
1 Amafutha aqinileyo, afana namalahle kunye necoke.
Amafutha olwelo, anje ngedizili, ioyile enzima, ipetroli enotywala
Fuel Amafutha erhasi, anjengegesi yamalahle, irhasi yendalo, kunye negesi engamanzi.
Umoya oshushu oveliswa kukudibana kwendlela yokutshisa ipetroli kunye nomoya wangaphandle kwaye uxube kubushushu obuthile, emva koko ungene kumatshini wokumisa ngokuthe ngqo, ke umoya oshushu oxubeneyo unxibelelana negranules yesichumiso ukuthwala ukufuma. Ukulungiselela ukusetyenziswa kobushushu bokusetyenziswa kobushushu, kufuneka kusetyenzwe ngokudibeneyo izixhobo zokutsha zombane, ezinje ngokutshisa amalahle, izitovu zeoyile, izitofu zegesi, njl.
Umgaqo wokuSebenza weSitovu somoya oshushu
Kwinkqubo yokumisa kunye nenkqubo yegranulation emanzi, isitovu somoya eshushu siyimfuneko izixhobo ezinxulumene noko, esibonelela ngobushushu obufunekayo benkqubo eyomileyo. Uluhlu lwesitovu somoya esinegesi / seoyile sinezinto ezinobushushu obuphezulu, uxinzelelo oluphantsi, ulawulo lobushushu oluchanekileyo kunye nokusetyenziswa okuphezulu kwamandla obushushu. Isifudumezi somoya sisekwe emsileni wesitovu somoya eshushu esikhulu ukuphucula ukusebenza kakuhle Isitovu somoya oshushu. Indawo yokufudumeza ebonakalayo yamkela inqanaba elifanelekileyo lokubala ukuqinisekisa ubushushu obupheleleyo bomzimba weziko kunye nokusebenza okuphezulu kobushushuIsitovu somoya oshushu.
Iimpawu zeHost-air Stove
Uvavanyo lwe Isitovu somoya oshushu ngumenzi wesichumiso esimbaxa ungqina ukuba indawo yokufudumeza inkulu ngokwaneleyo kwaye ivolumu yokuqhuma eshushu yanele, enciphisa kakhulu umahluko wobushushu phakathi kwentloko nomsila we Umatshini wokujikeleza owomileyo wesilinda, Ukuze umxholo wokufuma kwesichumisi ulawulwe ngokulula kuluhlu oluchaziweyo. Inyani ingqina ukuba ukusetyenziswa kweIsitovu somoya oshushu ayikwazi ukulawula kuphela ukufuma kwegranules emva kokumisa, kodwa isombulule ingxaki enkulu yokuhlanganiswa kwesichumiso, kwaye kwangaxeshanye kunciphise ukusetyenziswa kwearhente yokulwa necake ukunciphisa iindleko zemveliso.
Umboniso wevidiyo eshushu eshushu
Ukukhethwa kweModeli yeSitovu eshushu eshushu
Ukusebenza kobushushu （%）
Ukusetyenziswa kwamalahle (kg / h)
Ukusetyenziswa kwamandla （kw / h）
Umthamo wobonelelo lomoya (m3 / h)
Egqithileyo Umatshini wokuDibanisa isichumisi ojikelezayo
Okulandelayo: Ubushushu obuPhezulu beMizi-mveliso obukwenziweyo beFrafti yokuYila
Intshayelelo Luluphi uhlobo olutsha lwe-Organic Organic Granulator? Uhlobo olutsha lwe-Organic Fertilizer Granulator isetyenziswa ngokubanzi kwi-granulation yesichumiso sezinto eziphilayo. Uhlobo olutsha lwegranulator yezichumiso zezinto eziphilayo, ekwabizwa ngokuba ngumatshini wokugcotshwa okumanzi okumanzi kunye nomatshini wokwenza ingqibelelo yangaphakathi, sisichumiso esitsha sesichumiso somgquba ...
Uhlobo abakhasayo Organic lweNkunkuma Composting Turner Ma ...
Intshayelelo Uhlobo lwe -rawler ye-Organic ye-Waste Composting Turner Machine Ubume bohlobo lwe-Crawler ye-Organic ye-Wost Composting Turner Machine yeyomhlaba we-pile fermentation mode, eyiyeyona ndlela yoqoqosho yokugcina umhlaba kunye nabasebenzi okwangoku. Imathiriyeli ifuna ukufumba isitaki, emva koko izinto zivuselelwe kwaye cr ...
Intshayelelo Yintoni uMatshini oLayishayo kunye nokondla? Ukusetyenziswa komatshini wokulayisha kunye nokondla njengendawo yokugcina izinto ekrwada kwinkqubo yemveliso yesichumiso kunye nokusebenza kwayo. Ikwaluhlobo lwezixhobo zokuhambisa izinto ezikhulu. Esi sixhobo asikwazi ukuhambisa kuphela izinto ezintle ezinobungakanani be-particle engaphantsi kwe-5mm, kodwa kunye nezinto ezininzi ...
Intshayelelo Yintoni umatshini wesichumiso se-Urea Crusher? 1.Isichumiso Urea Crusher Machine ikakhulu usebenzisa ukugaya kunye ukusika umsantsa phakathi mqengqeleki kunye plate concave. 2. Ubungakanani kugqitywe limisela iqondo lokutyunyuzwa kwezinto, kwaye isantya sedrum kunye nobubanzi bunokuhlengahlengiswa. 3. Xa i-urea ingena emzimbeni, iya h ...